တရုတ်ရှန်ဒေါင်း သာ. ကောင်း၏မော်တော် - အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်က USA ကနေအင်ဂျင်နီယာလီ Dongwei ရှန်ဒေါင်း သာ. ကောင်း၏မော်တော် Co. , Ltd မှသွားရောက်ကြည့်ရှု
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်က USA ကနေအင်ဂျင်နီယာလီ Dongwei ရှန်ဒေါင်း သာ. ကောင်း၏မော်တော် Co. , Ltd မှသွားရောက်ကြည့်ရှု
ဇွန်လ 8 ရက်နေ့တွင်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာနှင့် Automation Engineer အလီ Dongwei အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်ကနေတက္ကသိုလ်အမေရိကန်နိုင်ငံ, Ltd. ရှန်ဒေါင်း သာ. ကောင်း၏ Motor Co. , လည်ပတ်ခဲ့
လီ Dongwei, Xi'an Jiaotong University ကနှင့်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာအဓိကနှစ်ဆဆရာဝန်ဒီဂရီသူအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်က USA အတွက်လျှပ်စစ်သိပ္ပံဓာတ်ခွဲခန်းကနေပါရဂူသုတေသီ Polytechnic တက္ကသိုလ် ၏ မီလန် နှင့်2နှစ် USA တွင်ပါရဂူသုတေသနပြုအတွေ့အကြုံကို။
သာ. ကောင်း၏မော်တော်နည်းပညာစင်တာ၌, Li က Dongwei သာ. ကောင်း၏မော်တော်အကြီးအကဲအင်ဂျင်နီယာမစ္စလီ Weiqing နှင့်မဆက်ဆံ။ လီ Weiqing လီ Dongwei လက်ရှိစီးရီးမော်တာဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းပြသခဲ့သည်။
ထို့နောက် သာ. ကောင်း၏မော်တော်သမ္မတမစ္စတာ Zhu Changkai အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခွင့်အလမ်းများအတွက်လီ Dongwei နှင့်တွေ့ဆုံရန်။ မစ္စတာ Zhu Li က Dongwei မှစီးရီး, ကုမ္ပဏီယဉ်ကျေးမှုနှင့်လက်ရှိအခြေအနေနှင့်အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်သည် သာ. ကောင်း၏မော်တော်သမိုင်းမိတ်ဆက်ပေးသည်။
ဤသည် သာ. ကောင်း၏မော်တော်အသစ်တစ်ခုအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့မော်တော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြင်အပေါ်အခြေခံပါလိမ့်မည်, မော်တာ function ကိုများနှင့်ဘဝတိုးတက်စေရန်အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ်မှတ်နှစ်ပေါင်းရာချီတိုင်အောင်, မော်တာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်ကမ္ဘာထဲမှာလူသိများသည် သာ. ကောင်း၏စေရန်ဖြစ်ပါသည်။
အချိန် post: မတ်လ-12-2018